I-Lemon Labidochromis Intlanzi | Ngeentlanzi
Los ILamon Labidochromis, Bangabosapho lakwaCichlidae, kwaye bahlala kwindawo ezinamatye emilambo kunye namachibi. Inokufumaneka kubunzulu obuphakathi kwe-10 ukuya kwi-40 yeemitha. Bazalelwe eLake Malawi, kokubini kunxweme olusentshona nakunxweme olusempuma. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ixesha lokuphila kwezi zilwanyana liyiminyaka esi-8 ukuya kweli-10. Nangona kunjalo, ukuba asiboneleli ngeemeko eziyimfuneko ukuze baphile njengakwindawo abahlala kuyo, banokuhlala kancinci.
Ezi zilwanyana zibonakaliswa ngokuba nomzimba wefusiform omde kakhulu, nebunzi elijikeleziweyo kunye nentloko etsolo. Okwangoku umbala ophuzi kakhulu kubukhulu bomzimba wayo, ngelixa amaphiko ayo enombala omnyama. Kuxhomekeke kubukhulu bephuli apho sinazo, ezi zilwanyana zinokulinganisa phakathi kwe-10 kunye ne-15 yeesentimitha.
Ilamuni yeLabidochromis, inkulu Umahluko ngokwesini. Umzekelo, iinkunzi zinkulu kakhulu kunamabhinqa, zinemiphetho ye-pelvic kunye neempundu zombala omnyama kakhulu, ngelixa ezinye zinombala othobekileyo. Nangona kunjalo, kumaxesha amaninzi sinokubabhidanisa abantu besini esahlukileyo, kuba amadoda anokuziphatha njengabantu ababhinqileyo, ethambise umbala wabo omnyama ukunqanda ukuphazanyiswa.
Ukuba ucinga unayo le mfuyo endlwini yakho, kubalulekile ukuba ugcine amanzi kubushushu obuphakathi kwama-25 nama-27 degrees celcius, ukuba i-aquarium inesakhono esingaphezulu kweelitha ezingama-200 kwindoda nganye nakwimazi emithathu, kwaye ine-pH phakathi ko-7,5 no-9,0. , XNUMX. Ngokubhekisele kumhombiso, ndicebisa ukuba ubeke i-substrate eyenziwe ngesanti entle kuba bethanda ukumba emhlabeni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » I-Aquarium yetropiki » I-Lemon Labidochromis Intlanzi